Mahajanga : Nidina an-dalambe ny vahoaka, nitaky ny famoahana ilay zazalahy 17 taona naiditra am-ponja
Vous êtes ici: Accueil → Faits-Divers → 2014 → mars → 26 → Mahajanga : Nidina an-dalambe ny vahoaka, nitaky ny famoahana ilay zazalahy 17 taona naiditra am-ponja
Nifanao fotoana teo amin’ny manoloana ny lapan’ny tanànan’i Mahajanga omaly maraina ny vahoaka rehetra tsy mankasitraka ny fampidirana am-ponja ilay zazalahy 17 taona voalaza fa nanolana zazavavy 5 taona tao anaty fiara fitateram-bahoaka. Ny ray aman-dreny, ireo mpampianatra ary ireo mpiara-mianatra amin’ilay zazalahy eny amin’ny sekoly Avenir eny Ambondrona no niara-nientana tamin’izany. Nilahatra mandra-pahatonga teny amin’ny fitsarana ambaratonga voalohany, nitaky ny famoahana io zazalahy nampidirina am-ponja io. Tsy rariny ary tsy marina ny fiampangana, hoy ny maro, fa fanendrikendrena fotsiny ihany ka mitaky ny marina izy ireo ary mangataka ny hamerenana indray ny famotorana rehetra miaraka amin’ny porofo.
Nizotra am-pilaminana ny diabe tamin’io fotoana io. Tsy lasa lavitra akory anefa fa vao teo amin’ny manoloana ny zaridaina Santatra teo Mahajanga be dia tonga ireo avy ao amin’ny Emmo Reg nanakana izany ary nanesy ireo mpitaky zo hiverina eny amin’ny lapan’ny tanàna, satria hoe tsy nahazo fahazoan-dalana. Niezaka ny nanohitra ihany ireo vahoaka sady niantsoantso hoe avoahy ny zanakay ary avoahy ny marina. Na teo aza io, tsy nanaiky ireo mpitandro ny filaminana fa namerina azy ireo hatrany.
Tamin’io andro io ihany, rehefa nifampiresaka ireo ray aman-dreny dia nanapa-kevitra fa ny ampitso no hotohizana ny hetsika ary tsy hifarana raha tsy mivaly ny fitakiana. Niantso koa ireo ray aman-dreny sy ireo mpampianatra amin’ireo sekoly hafa mba hanatevin-daharana ny fitakiana. Niantso izy ireo ny tokony hanakatonana ny sekoly rehetra rahampitso ka hiray feo ny rehetra, satria ny mahazo io zazalahy io dia mety hahazo ny rehetra tsy an-kanavaka ihany koa. Taorian’io, niezaka nangataka fihaonana tamin’ny lehiben’ny faritra ireo ray aman-dreny sy nihaona tamin’ireo olobe ato an-tanàna, hisian’ny marimaritra iraisana. Andrasana izay ho tohiny.